Kedu otu esi mepụta ngwaahịa Amazon gị?
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ị ga-ere na Amazon na 2018, isiokwu a ga-adọrọ mmasị gị. N'ebe a, anyị ga-atụle ihe nzuzo nke ihe ịga nke ọma na Amazon na ihe ndị ga-ewetara gị uru. Ọzọkwa, anyị ga-enweta nsogbu ndị dị mkpa na ire na Amazon iji nyere gị aka izere imehie ihe - dominios gratuitos 2016.
Olee otu esi achọpụta ngwaahịa na-ekwe nkwa ịkwụrụ na Amazon?
N'okpuru ala nke azụmahịa ịzụ ahịa Amazon gị, ịchọrọ ịchọta ngwaahịa ndị nwere ike ịba uru ma zụrụ ya nke ọma. Ọ bụ nzọụkwụ dị oke mkpa nke chọrọ oge na mgbalị gị. Ọ dabara na, Amazon na-enye gị ọtụtụ data ị chọrọ ịmalite.
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịlele ihe mere nke a ma ọ bụ nke ahụ ji baa uru maka gị dịka onye na - ere ere.Ị ga-agafe ihe ndị dịka mbupu ebufe, nchụso ahịa ahịa, ụdị ewu ewu na àgwà onye ahịa maka ngwaahịa nke klas a. Nhọrọ gị kwesịrị izute ọtụtụ n'ime njirisi ndị a.
Ihe ndị a na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ ndị nwere ike ịmepụta ga - enyere gị aka ịhọrọ nhọrọ nhọrọ dị mma:
ọnụahịa ga - abụ pasent 35% nke ire ere gị ezubere;
ọnụahịa ire ere azụ n'etiti $ 10- $ 50;
enweghi mbupu mfịna maka oke mpempe nke stof (2-3 lbs. oke);
ọ ka mma na ihe ndị ị ga - enwe enweghị ike igbochi ma dị mfe ịnapụta;
zere oge ezumike ma ọ bụ ngwaahịa ezumike dị ka ha agaghị eme ka ị nweta afọ ahụ dum;
ngwaahịa gị kwesịrị ịma ọkwa site na ịdị elu ha na icheiche ha.
Na mgbakwunye na ihe niile a tụlere n'elu ihe, ịkwesịrị ịlele ma otu ihe dị elu, ma ọ bụ ịchọta ihu ọma n'etiti ndị ahịa Amazon.Otú ọ dị, ọ dị gị mkpa ijide n'aka na ngwaahịa anaghị enwe oke asọmpi ka ọ ga-ebelata ohere ị ga-esi pụọ n'ìgwè ahụ.
Ụfọdụ ihe ndị dị mkpa na-egosi ọkwa dị mkpa nke ngwaahịa na Amazon:
ngwaahịa ndị ị họrọ ekwesịghị ịla ezumike nká site n'aka ndị ahịa Amazon ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ;
ngwaahịa ndị yiri nke a nwere ọkwa Amazon kachasị mma nke 5000 ma ọ bụ dị ala n'ogo;
ndepụta ngwaahịa yiri nke ahụ adịghị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ;
enweghị nyocha nke ngwaahịa;
isiokwu ndị e bu n'uche na ngwaahịa nwere ihe karịrị 100,000 nyocha kwa ọnwa.
N'akụkụ nke abụọ nke nyocha ahịa gị, ịkwesịrị ịlele ozi na ibe ngwaahịa nke ihe ndị yiri ya. Ndepụta ngwaahịa nwere ike ịgwa gị ọtụtụ ihe banyere àgwà na uru ngwaahịa. Mgbe mepee akwụkwọ Amazon, chebara ọnụahịa, ụgwọ ọnụahịa, akụkụ ngwaahịa, ibu ibu, na ọkwa kachasị mma Amazon. E kwesịrị ilebara nlezianya anya maka ọnụ ọgụgụ ndị ahịa na ọnụ ọgụgụ kpakpando. Ọnụ ọgụgụ na àgwà nke ngwaahịa ngwaahịa na-egosi nzaghachi nke onye ọrụ na ihe dị mkpa na mgbasa ozi ya.
Olee otú ndị ahịa kachasị mma nke Amazon ga - esi enyere gị aka ime mkpebi amamihe dị na ya?
Nsonaazụ Ahịa kachasị mma Amazon bụ ndepụta nke TOP 100 na-ere ihe na mpaghara niile. Ihe ndepụta a nwere ike ịdị iche na kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị nọ n'usoro nke ịhọrọ ihe ndị dị oké ọnụ ahịa iji ree na Amazon, akụkụ a ga-adọrọ mmasị maka ịchọta. Site na ibe a, ị nwere ike ịkụda n'ime TOP 100 kachasị mma maka akwụkwọ ndị ọzọ na ngalaba nchịkọta. Data a nwere ike bụrụ ihe dị oké ọnụ ahịa maka usoro nyocha ọchụchọ gị.
Na - achọgharị site na ndepụta Ahịa kachasị mma Amazon, ịkwesịrị ịza ọkwa n'isiokwu ndị a:
0) Akụkụ a na-egosi ngwaahịa ndị na-ewu ewu bụ ndị ghọrọ ndị a ma ama ma zụrụ nke oge ikpeazụ. Ihe ndekọ a dabere na ndị Amazon na ndepụta nchịkọta akụkọ na nchịkọta. N'ebe a, ị nwere ike ịkụda ala iji hụ New Releases na ngalaba na mpaghara nchịkọta. Mara na data a nwere ike gbanwere n'oge.
Movers na shakers
Nke a na-egosi gị ihe ndị na-agba ọsọ ngwa ngwa n'ahịa kachasị mma n'ahịa niile. Dịka iwu, ọ na-agụnye ọnọdụ ọkụ na oge ahịa. Ngwaahịa ndị a kwesịrị ilebara anya dịka ha na-ewu ewu ma na-ekwe nkwa, mana ha adịghị asọ asọmpi. Ọzọkwa, ụdị a nwere ike ịba uru maka ịchọta ihe niche ọkụ ọkụ.
Ihe kachasị amasị maka
Lee ị ga - achọ ngwaahịa kachasị amasị na Amazon. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ndị na-azụ ahịa Amazon na-echekwa ihe ndị a na nchịkọta nhọrọ ha. Ọ pụtaghị ịzụta kama ka na-egosi mmasị ndị ahịa.
N'ebe a ị ga-ahụ ngwaahịa ndị na-ere ahịa Amazon ga - azụta dị ka onyinye. Ọ bụ ihe ngosi dị mma nye ndị na-ere ihe kachasị mma n'ime akwụkwọ niche maka ọtụtụ oge, na ihe ndị metụtara ezumike.
Nsogbu nkịtị na-ere na Amazon
Ndị ahịa nwere ike inweta ego ha n'ime izu ole na ole
Ọ bụrụ na ị na-ere ngwaahịa gị na Amazon, ịkwesịrị ịgbaso ahịa Amazon ma ọ bụ ndị na-ere ahịa Central. Dị ka ha si kwuo, a ga-akwụ ụgwọ site na nkwụnye ego kpọmkwem na akaụntụ nlele gị kwa ụbọchị 14. E nweghị usoro ịkwụ ụgwọ ọzọ ị nwere ike iji na Amazon. Ikwesiri iburu nsogbu a n'uche mgbe ị na-eme atụmatụ atụmatụ azụmahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eji revenue gị azụ ahịa iji zụta ngwaahịa ọhụrụ iji ree ya, ọ nwere ike ịbụ ihe ịsụ ngọngọ maka azụmahịa gị.
Oghere na ntinye
N'ụbọchị ndị a, ọ naghị adị mfe ịghọ onye na-ere Amazon ka ọ dị. E nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-emebi iwu Amazon ma ghara iwetara uru n'elu ikpo okwu. Ọ bụ ya mere Amazon ji dịkwuo mfe ikwe ka ndị ahịa rere ihe ha na n'elu ikpo okwu. Ndị na-ere ahịa, akpụkpọ ụkwụ, ihe ndị na-emepụta ụgbọala na ihe ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa, kwesịrị inweta nkwenye sitere na Amazon.
Ị ga - enwe nsogbu na ịmepụta profaịlụ nzaghachi
I kwesịrị inwe akụkọ ihe mere eme dị ogologo ma dị mma ka ị nweta ezumike zuru ezu iji bulie elu na Amazon SERP. Ọzọkwa, a machibidoro ịkwalite ndị ọrụ na-ahapụ nzaghachi na ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na ama ama Amazon na ndepụta gị anaghị arụ ọrụ, ha niile ga-ewepụ gị, ị ga-atụfu ọkwa gị.